Ma Kufsi baa haddii ninku xaaskiisa qasab kula seexdo…..? | shumis.net
Home » galmada » Ma Kufsi baa haddii ninku xaaskiisa qasab kula seexdo…..?
Ma Kufsi baa haddii ninku xaaskiisa qasab kula seexdo…..?
Sida dad badan ay la socdaan Wadamada europe waxaa loo arkaa kufsi in ninku uu xaaskiisa ama gabadha ay saaxiibka yihiin qasab kula seexdo. Dhowr jeer oo maxkamad la soo taagay arimaha nuucaan ah ayay isku qilaafeen xaakimyada, iyadoo ay arintaas dood kulul ka dhalatay in marka gabadhu ay tiraahdo MAYA diyaar uma ihi in ninku uu ku qanco.
Dhaqankeena Soomaalida ayay caadi ka tahay in xaaska aysan marnaba MAYA dhihi karin ninkeeda, iyadoo loo cuskanayo diinta balse sida aan wada ognahay dumarku waa bani’aadam. Xiriirka lamaanayaashuna waa mid isbedalo ay ku dhacaan. Marka laga gudbo todobada iyo farxada bilaha hore waxaan wada ognahay in dareenka lamaanayaashu uusan ahayn sidii hore, oo marar badan ay meesha ka maqantahay niyada iyo rabitaanka sariirta.
Hadaba su’aashu waxay tahay ninku xaaska maku qasbi karaa sariirta. Xitaa haddii aysan rabin? Mise sariir aan jaceyl iyo farxad lahayn ma leedahay raaxada laga doonayo? Ka warama dhinaca kale, ee ragga iyagu aan gudan waajibkooda sariirta ee Khaatka ku mashquulsan oo aan xaaskooda xakheeda siinin? balse markii ay rabaan korka isaga tuura iyaga oo tiigsanaya diinta?
Maxaad ku dari lahayd oo fikrad iyo aragti ah? Waa DOOD furan…qaasatan waxaan jeclahay aragtida dumarka iyo dareenkooda ku aadan mowduucaan?
Title: Ma Kufsi baa haddii ninku xaaskiisa qasab kula seexdo…..?
Posted by galmada Net, Published at February 23, 2016 and have 0 comments